ကလေးကို နေ့တိုင်းမေးရန် မေးခွန်းများ – Burmese Baby
ကလေးကို နေ့တိုင်းမေးရန် မေးခွန်းများ
Web Master | February 11, 2018 | Lifestyle | Comments
ဂရုစိုက်တတ်တဲ့မိဘတွေတောင် တခါတလေမှာ ကိုယ့်ကလေးက sexual abuse ၊ တခြားနည်းနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံထားရသလားဆိုတာ သတိမထားမိတာမျိုးရှိတယ်။
Sexual abuse လို့ပြောတဲ့အခါမှာ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့အဆင့်မရောက်ပဲ တခြားအဆင့်တွေလဲပါပါတယ်။ ကလေးရဲ့ private parts ကို ကိုင်တာ၊ ကလေးကိုမဖွယ်မရာနမ်းတာ၊ သူတို့အပေါ်ထိုင်ခိုင်းတာ၊ သူတို့ကိုကိုင်ခိုင်းတာ စသဖြင့်ပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများဆုံးကြားရတာက “ကျွန်မက သမီးလေးမွေးထားလို့ စိုးရိမ်မိတယ်”၊ “နင်က သမီးလေးမွေးထားတာ ဂရုစိုက်နော်။ ငါမွေးထားတာက သားမို့လို့ ပြဿနာမရှိဘူး” ဆိုတာပါ။ အင်မတန်မှားပါတယ်။ သားရော သမီးရော အတူတူပါပဲ။ဟိုနေ့ကရေးခဲ့တာက ကလေးတွေကို ကြိုပြီးသင်ထားဖို့အကြောင်း။ ဒီနေ့ရေးမှာက ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့တနေ့တာအကြောင်း ညင်ညင်သာသာ မေးတဲ့နည်း။ကိုယ့်အမျိုးအိမ်မှာထားခဲ့ရတာမျိုး၊ ကျောင်းကို ကျောင်းကားနဲ့လွှတ်လိုက်ရတာမျိုး၊ ကိစ္စရှိလို့ဘေးအိမ်မှာ ခဏအပ်ခဲ့ရတာမျိုး၊ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ sleep over (ညအိပ်ညနေပေးနေတာမျိုး) လုပ်တာမျိုးတွေပြီးတိုင်းမှာ ကလေးကို ပြန်မေးရပါမယ်။
– ဒီနေ့ သားသား ကျောင်းမှာ လိမ္မာသလား?
– အခုဒီမှာခဏထားခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်း ဒီကလူကြီးတွေစကားနားထောင်ရဲ့လား? ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲ ကလေးကိုမေးကြတယ်။
– ဒီနေ့ကျောင်းမှာ/သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ/ခဏထားခဲ့တဲ့အိမ်မှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ?
– ဒီနေ့အဖို့ အကြိုက်ဆုံးက ဘာလဲ?
– ဒီနေ့အဖို့ မကြိုက်ဆုံးက ဘာလဲ?
– အမေ့ကို/အဖေ့ကို ပြောပြချင်တာရှိလား?
စတဲ့မေးခွန်းတွေကို ကလေးနဲ့မိဘနဲ့ကြားပဲ မေးပါ။ သူများတွေရှေ့မှာမမေးပါနဲ့။ သူများတွေရှေ့မှာပြောရမှာအဆင်မပြေလို့ ကလေးကညာလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို အကျင့်တခုအနေနဲ့ အမြဲမေးပါ။ မေးရင်းနဲ့သူတို့ပြောပြစရာရှိရင်လဲ ဖြည့်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာလဲပြောပေးပါ။
မြန်မာမိဘတွေအားနည်းချက်က ကလေးတွေကို အချိန်မပေးပါဘူး။ ကလေးတွေပြောတာကို သေချာနားမထောင်ပေးပါဘူး။ ကလေးမှာပြောစရာရှိနေတာတွေကို အရေးမပါဘူးဆိုပြီး စိတ်မရှည်ပါဘူး။ လူ့လောကမှာ နှစ်အနည်းငယ်သာနေရသေးတဲ့ကလေးမှာ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပြောစရာပဲရှိမှာပါ။ ကိုယ်ကသိပြီးသားဖြစ်နေပေမယ့် စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပေးမှ ကလေးက ကိုယ့်ကိုပိုရင်းနှီးမယ်။ မိဘက သူ့ကိုတန်ဖိုးထားတာ၊ အလေးအနက်ထားတာသိမယ်။ သူဟာအရေးပါတာသ်ိမယ်။ သူ့အခက်အခဲမှန်သမျှကို သေချာပြောပြမယ်။
အပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကို နေ့စဉ် ကလေးကိုမေးတဲ့အကျင့်လုပ်ပါ၊ သူပြောတာတွေသေချာနားထောင်ပေးပါ။ သံသယဖြစ်စရာတခုခု သူ့အဖြေထဲမှာပါလာရင် သေချာစေ့စေ့စပ်စပ်ထပ်မေးပါ။
Aye Aye Myo Set (Jessica Mozart)
ကလေး အသက်အရွယ်အလိုက် သင်ပေးသင့်တဲ့ အရာများ Jessica Mozart (A Cool Mom)
Comments | Feb 13, 2018
ကလေးလေးတွေကို tummy time ဝမ်းလျားမှောက်ချိန် ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ ခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ ပခုံး၊ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းလေးတွေ သန်မာအောင်ပေါ့။နောက်ပိုင်း စောင်းဖို့ မှောက်ဖို့ လှိမ့်ဖို့ လေးဘက်သွားဖို့ပေါ့။
Comments | Feb 11, 2018
ကလေးတွေကို အားတက်အောင် ဘယ်လိုစကားလေးတွေ ပြောပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ ဘာစကားတွေ မပြောမိအောင် ဆင်ခြင်သင့်တယ်ဆိုတာလေး ပြောပြမယ်နော်။
Comments | Mar 11, 2018